मतदाताले होइन छोरीलाई राज्य शक्तिले जिताउँछ! | परिसंवाद
गफाष्टक आइतवार, बैशाख २५, २०७९ मा प्रकाशित
चितवनको भरतपुरमा गज्जबको चुनाउ हुदैछ । यस्तो चुनाउ कि त्यहाँ छोरीले जिते यो नेपाल भन्ने राष्ट्र र नेपाली कांग्रेस भन्ने पार्टी रहन्छ, छोरीले हारेमा यो राष्ट्र र कांग्रेस रहदैन । यो खालको चुनाउ नेपालमा पहिलो र अन्तिम चुनाउ हुन लागेको हो । अहिले हाम्रो सम्पूर्ण राज्यशक्ति भरतपुरमा घोप्ट्याएका छौं। यदि यति गर्दा पनि नानी छोरीले नजितेमा देश दुर्घटनामा पर्ने त छदैछ कांग्रेस तुरुन्तै समाप्त हुन्छ । यो ठोकुवा मेरो होइन रेणुका बाउको हो । अस्ति होउ अस्ति बिहीवारको दिन भरतपुरकै डुवान क्षेत्रमा उभिएर छोरीका बाउ क्या प्रचन्नले कांग्रेसले हँसिया हथौडामा भोट दिएर छोरी रेणुलाई नजिताए नेपाल दुर्घटनामा पर्ने र कांग्रेस समाप्त हुने भनेर ठोकुवा गरिदिए। नेपालका अरु पालिकामा चुनाउ हुन लागेकै छैन खाली भरतपुरमा मात्र चुनाउ हुदै छ भने जस्तो पो बनाई दिए। हाम्रो प्रचन्न मान्छे त तगडा हुन।
प्रधानमन्त्री देउवा, रामचन्द्र, माधवहर्लाई हाम्रो महान नेताले लर्को लगाएर भरतपुर पुराए। त्यहाँ देउवाले राम्रो बोले। `हामी कांग्रेसका कार्यकर्ता हौ, रुख चिन्हमा भोट हाल्न पाम´ भन्ने कांग्रेसीलाई `अाँसी र हेम्मर चिन्हमा भोट हाल्नु, नत्र तिमारूलाई पार्टीबाट निस्कासन गर्छु´ भनिदिए । चितवनका कांग्रेसीले तोरीको फूल मात्र होइन, दिउसै तिरिमिरी झ्याइँ हुने गरी तारापुञ्ज देखे । रामचन्द्र बाजेले पनि अोलीलाई हराउन कांग्रेसजनले हँसियामा बसेर हेम्मरले कुच्च्याउनु भनी दिए। कठैबरा ! माधव काम्रेडको समय चाहिँ एमाले र अोलीलाई सराप्तैमा सकियो। हुन पनि हो प्रचन्नको छोरी रेनुले चुनाउ हारिन भने यो सरकार पनि रहँदैन र गठबन्धन पनि तोडिन्छ । यसैले त चुनाउ जति सप्पै भरतपुरमा छ ।
नमस्कार है विध्वंसे काका ! अब चुनाउ अाउन पाँच दिन मात्र बाँकी छ । तिमी भने मेरो प्रचारमा पनि हिड्दैनौ । के तिमीले गठबन्धन तोडेकै हौ? होइन भने चारतारे झण्डा बोकेर लुरुलुरु जुलुसमा हिड।
हेर भिरघरे! म माअोवादीको नेता तँ कांग्रेस। अनि कसरी चारतारे झण्डा बोकेर `भोट केमा, रुखमा´ भन्दै हिड्नु हौ! तँ अाफै भन्त। एउटा पनी सदस्य हामीलाई देको रछ त्यो पनि ५ नं. वडामा। म चाहिँ हिड्दिन। पार्टीले कार्वाही गरे सहुँला बुझाउला।
कस्तो कुरै नबुझी बोल्छौ काका! उहाँ हाम्रो सभापति तथा प्रधानमन्त्री देउवा दाइ त तिमार्को छोरीलाई जिताउन बास बस्तै भरतपुर पुगेर `भोट केमा, अाँसी र हम्मरमा´ भन्दै कम्युनिष्टेको झण्डा बोकेर हिडेका छन्। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र रेनुको विकास देखेर मञ्चमै मुर्छा परेका। उहाँ विजयले जितेनन् भने जगरनाथले जित्छन्। त्यसपछि तेस्रो हुने पालो यसपालि रेनुकै जस्तो छ।
हौ भिरघरे दाइ! काकालाई अब नसम्झाए हुन्छ। माअोवादी केन्द्रले जित्नै पर्ने र जीवन मरणको विषय बनाएको पालिका भनेको भरतपुर महानगरपालिका नै हो। त्यही पालिकाका कांग्रेसीले रेनुलाई भोट नदिने भएसी तिम्रो प्रचार गर्न चारतारे झन्डा बोकेर काका किन हिड्थे। यो गाउँ पालिका, भरतपुर र पोखरा महानगरपालिका साथै उपत्यकाका सप्पै पालिका हाम्रो एमालेका उम्मेदवारले जित्छन्।
हेर सण्डे ! पोखरा त भन्न शक्तिन भरतपुरमा चाहिँ कुनै पनि हालतमा रेनुलाई जिताइन्छ। होइन भने त्यहाँको चुनाउ रद् हुन्छ। छोरी रेनुले जित्नैपर्छ र हार्ने भए सत्ता शक्तिले जिताउँछ। सम्पूर्ण खनिदा पनि नाथे एमालेलाई हराउन नसक्ने हो भने हाम्रो प्रचन्नले शेरबहादुरलाई पनि फकाएर कांशी पुराउँछन् । हाम्रो महान काम्रेडले उच्च छलाङ लगाउदै गर्धनमा टेकेर खप्परमा बजाउने दिन अाए। अब यो हाम्रो उभिण्डे पालिकामा चाहिँ एमालेलाई भोट दिने अलि बढी छन्। अन्त त एमालेको विउ पनि छैन। यहाँ पनि उभिण्डेको बाक्लो बस्तीमा पसेर रुखलाई राम्रोसँग भोट माग्ने हो भने भिरघरेले जित्न बेर लाम्दैन । पिर नगर भिरघरे ! चुनाउ हो हारजित स्वभाविक मान्नु पर्छ । म पनि तेरो लागि भित्रभित्रै भोट मागेर हिड्दै छु। एमालेलाई नहराए प्रचन्न काम्रेडको अवस्था कस्तो होला म त कल्पना गर्न पनि शक्तिन । तर, कांग्रेसीको विश्वास भने छैन है।
कांग्रेसको विश्वास छैन भने हाम्रो देउवा दाइसँग किन शरण मागेको? जसको टेक्ने समाउने केही छैन, जसलाई जनताले विश्वास गर्दैनन् र जसको कसैसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षमता छैन त्यस्ताले `कांग्रेस महान´ भनेर किन लोलोपोतो गर्नु! अस्ति पनि प्रचन्नले भरतपुर पुगेर कांग्रेसहर्लाई विरोधी बनाए। के हामीले हार्दा राष्ट्रमा केही नहुने छोरीले हार्दा दुर्घटना हुने पनि हुन्छ? हाम्रो सिर्जना सिंहले हार्दा हुने रेनुले हार्न नहुने! यस्ताको सहयोगमा प्रधानमन्त्री बन्नु भन्दा प्रधानमन्त्री पद नै नारायणीमा अाफल दिए हुन्छ । अाखिरमा देउवा दाइले नेपाली कांग्रेसको पनि चोक्टा एकातिर लाम्टो अर्कोतिर बनाउने भए। संगत अनुसारको बुद्धि भन्छ ठ्याक्कै देउवा दाइमा त्यही फलेको, फूलेको देख्छु ।
बढी नबोल भिरघरे ! हाम्रो संगतले देउवा प्रधानमन्त्री बनेका हुन। हाम्रै कारणले कांग्रेसले सत्ताको नेतृत्व गर्न पाएको छ। हाम्रै कारणले जनता सुखी र देशमा भयङ्कर विकास …!
लु हौ यो खालको पाङदुरे कुरा चाहिँ तिमी बाहेक अरुले गर्न सक्तैन हौ काका! जनता सुखी र देशमा भयङ्कर विकास होइन तिमार्ले जनता दुखी र देशलाई टाट पल्टाउने काम गर्दै छौ र निरन्तर गरिरहेका छौ। विकासका कुनै काम भएका छैनन्, अर्थतन्त्र डामाडोल छ। मुलुकलाई यो अवस्थामा पुगाउने तिमारू हौ। यो परमादेशी सरकार र गठबन्धनका कारण देश कंगाल हुदै छ। रेनुले हार्दा देश दुर्घटनामा पर्दैन। तर, यो गठबन्धन र यो सरकार रहिरहेमा देश दुर्घटनामा पर्छ।
सण्डेले ठिकठिकै भन्यो। वास्तवमा हामीले जति खोके पनि नेपालको सबैभन्दा ठूलो पार्टी एमाले नै हो। र, अब पनि एमाले नै सबै भन्दा ठूलो हुने लक्ष बोकेर अगाडि बढेको देखिन्छ। म कांग्रेसको जिल्ला नेता भएको कारण झुठ बोल्न शक्तिन। एमालेको प्रशंसा गरेको जगरनाथ पौडेलले एमालेको वास्तविकता बताएको हो। काका अरु कुरा चुनाउ पछि गरौला। चारतारे झन्डा बोकेर मेरो प्रचारमा अाउ। अहिले हामी उभिण्डेतिर लाग्छौ।